Tun Tun's Photo Diary: Miss Myanmar World 2014 contestants @ Singapore
Miss Myanmar World 2014 contestants @ Singapore
ဒီလ ၁၇ရက်နေ.က Miss Myanmar World 2014 ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၉ ယောက်စင်ကာပူ မှာရှိတယ်။ ပြီးရင် Botanic Garden မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို.ရှိပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့ မြန်မာ photographer များ အခမဲ့ လာရောက် ရိုက်ကူးနိုင်တယ် ဆိုတာ facebook ရှယ်ထားတာ တွေ.လို. Organizer Ko Thar Phyo ကို message ပို.ပြီး တော့ နေရာနဲ. အချိန်ကို မေး ပြီး ဓါတ်ပုံသွားရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
I was at Singapore Botanic garden on 17 September to shoot Miss Myanmar World 2014 contestant who are in Singapore for training. We started shooting at 10:30pm till 12 noon. Even though there are 19 contestants in the competition, only 13 showed up for this photo shoot. Most of the contestants are teenagers. They are very friendly and very easy to work with. Thank to Organizer Ko Thar Phyo who make this happen.
No 16. Tin Sandar Myo
မနက်ခင်း ၁၀နာရီ ခွဲလောက်ကနေ နေ.လည် ၁၂ လောက်ထိရိုက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၉ ယောက် စင်ကာပူမှာ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် Botanic Garden ကို လာတာ ၁၃ ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ Model တွေ များတော့ ဘယ်သူ.ကို ရိုက်ရမှန်း မသိအောင်ကို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို. ၁၃ ယောက် လုံး စုံအောင်တော့ မရိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ပေးတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ သူတွေကိုပဲ အသားပေးပြီး ရိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တချို. Miss တွေလဲ သဘောကျပေမယ့် အချိန်ပြည့်လို. မရိုက်လိုက်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။
No 3. Inngyin Htoo
Miss တွေ တော်တော်များများက ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ များပါတယ်။ အားလုံးက သဘောကောင်းပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ သူနဲ. အပေးအယူ တည့် တဲ့ အတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ပုံတွေ နည်းနေလို. ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း Rich Loh ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတချို.ပါ ရောပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
သရဖူ ဘယ်သူရမှလဲ ဆိုတာတော့ ၂၇-စက်တင်ဘာ ပွဲပြီးရင်တော့ အဖြေမှာပေါ့။ Botanic Garden ကိုလာတဲ့ ၁၃ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ယောက် ဖြစ်ပါစေလို.ဆုတောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ Crown ရမည့်သူကို တွေ.ထားပြီ။ သင်ကော ဘယ်သူ Crown ရမယ်လို. ထင်ပါသလဲ?
After the photo shoot, I could imagine who deserve the crown. The winner will be selected on 27-September. Which girl do you think will get the crown? Leave you opinion on the comment box. :)
No 15. Lin Cherry Moe
No 19. Anna, No 16. Tin Sandar Myo & No 15. Lin Cherry Moe
No 8. Htet Htet Win, No 19. Anna & No 18. Yoon Me Me Mg
No 8. Htet Htet Win & No 18. Yoon Me Me Mg
No 4. May Madi Khin
No 12. Yoon Hay Thar
No 20. Hazel
No 11. Kay Theri
No 8. Htet Htet Win
No 12. Yoon Hay Thar & No 9. Chan Myae Thu
No 13. Chuu Nadi Khin
at 9/25/2014 01:37:00 AM
Labels: Celebrity, Model, Portrait
I guess, No. 8
Anonymous September 25, 2014 at 5:53 AM
Singapore Chinatown Mid-Autumn Festival Decoration...
Singapore Kite Festival 2014 & Thai Dinner